डीसीबीएल बैङ्क लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी डीसीबीएल बैङ्क लिमिटेड
डीसीबीएल बैङ्क लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय : काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाडौं
स्थापना : २०५७ माघ १९
अध्यक्ष : कृष्णलाल महर्जन
मुख्य कार्यकारी अधिकृत : सुधीर खत्री
शाखा कर्यालय : २१
संस्थापक शेयर : ५१ प्रतिशत
सर्वसाधारण शेयर : ४९ प्रतिशत
विसं २०५७ मा स्थापना भए पनि यस बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट २०६३ माघ १९ गतेदेखि ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्था (विकास बैङ्क) को मान्यता पाएको हो । २ वर्षसम्म विकास बैङ्कका रूपमा आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको यो कम्पनी २०६५ जेठ १२ देखि ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति भएको हो । आव ०६५/६६ का लागि लगानीकर्ताहरूलाई १० प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गरेको यो बैङ्कले गत वर्ष५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । हाल यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रावधानअनुरूप पूँजीगत संरचना मिलेको भए पनि चुक्ता पूँजी पुर्याउनका लागि भने यो वर्षबैङ्कले कम्तीमा ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई प्राविधिक विश्लेषणको औजार आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा अहिले यसको शेयर न्युट्रल जोनमा देखिएको छ । यो कम्पनीको आरएसआई रेखा अहिले स्केल ५१ मा रहेकाले न्युट्रल जोन भनिएको हो । केही समयदेखि लगातार घट्दो चालमा रहेको यस बैङ्कको आरएसआई रेखा केही पहिला स्केल ४२ मा सामान्य टेवा पाएर अहिले स्केल ५१ बाट माथि लागेको छ । सन् २०११ को फेब्रुअरी अन्त्यदेखि मार्चको शुरुआतमा ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको यो बैङ्कको आरएसआई रेखा त्यसपछिका दिनमा क्रमश: अकालो लाग्दै गएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्यसँगै सुधार भएर न्युट्रल जोनमा आएको आरएसआई रेखा अझै बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । आरएसआई रेखाको चालअनुसार यो बैङ्कको शेयरमूल्यमा अझै केही समय प्रतिरोधको सम्भावना कमै देखिएको छ । फलस्वरूप, यो कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले केही कारोबार अवलोकन गरी खरीद गर्नु उपयुक्त देखिन्छ भने विक्रीकर्ताहरूले ओभरबट बियरिश रिभसलको प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
चालू आव ०६७/६८ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । चालू आवको पहिलो ९ महीनामा यस बैङ्कले रू. ११ करोड ६५ लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । सो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा शून्य दशमलव २१ प्रतिशतले कमी हो । यस बैङ्कले प्रकाशित गरेको चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा सो तथ्य उल्लेख छ । साथै, सो अवधिमा यस बैङ्कको जगेडा कोष अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ७ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर हाल रू. २२ करोड ८६ लाखमा सीमित भएको छ । त्रैमासिक मुनाफा दरमा आएको सामान्य कमी तथा जगेडा कोषमा आएको ह्रासले यो बैङ्कले आगमी वर्षदिने मुनाफामा कमी हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैगरी, सो अवधिमा यो बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन २३ दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि गरी हाल रू. ९ अर्ब ४० करोड पुर्याउन सफल भएको छ । त्यसैगरी लगानीमा २ सय १८ दशमलव ८२ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि भएर हाल रू. २ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । बैङ्कले गत वर्षको तुलनामा आफ्नो लगानीको क्षेत्रलाई विस्तार गरेकाले आगामी दिनहरूमा मुनाफादर वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ । साथै ऋण प्रवाह पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २९ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
• असार १५ गते वुधवार यो बैङ्कको शेयर रू. १ सय २३ मा सामान्य टेवा पाएर रू. १ सय ३७ मा पुगेर बन्द भएको छ । सो दिन २४ कारोबारबाट यस बैङ्कका जम्मा ५ हजार ५ सय ३९ कित्ता शेयर किनबेच भएका थिए । विगतमा अन्य कम्पनीहरूको शेयर निकै म्याचिङ हुने गरेको भए पनि यो बैङ्कको शेयरमा खासै म्याचिङ हुने गरेको छैन ।
• आव ०६७/६८ समाप्त हुन लागेको र बैङ्कले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने मुनाफादर निर्णयगर्ने समय आएको हुनाले यसको शेयर खरीद गर्न चाहनेले केही समय प्रतीक्षा गर्नु राम्रो हुनेछ । साथै, यस वर्षबैङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई न्यूनतम ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने सम्भावना छ भने हाल जगेडाकोष तथा मुनाफादरमा देखिएको कमीले नगद लाभांश दिने सम्भावना कमै छ ।
• बैङ्कले चुक्ता पूँजीको अनुपातअनुसार मुनाफा दरमा वृद्धि गर्न नसकेकाले मूल्य-आम्दानी अनुपातमा सुधार हुन सकेको छैन । त्रैमासिक रूपमा यो बैङ्कको प्रतिशेयर आय र मूल्य-आम्दानी अनुपातमा सुधार नभए पनि वार्षिक रूपमा यी वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार हुने सम्भावना छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैङ्कको निष्त्रिmय कर्जा अनुपातमा शून्य दशमलव १९ मा आएको छ ।